Maitiro ekunakidzwa neLinux kuburikidza nebhurawuza rako | Linux Vakapindwa muropa
Kutenda kumatekinoroji matsva, isu tinogona kutonakidzwa nemaLinux anoshanda masisitimu mune yedu internet browser, kubva kune chero sisitimu inoshanda uye pasina chikonzero chekuisa zvachose chero chinhu.
Izvo zvinopera pasina kutaura kuti mazhinji eanoshanda masystem anouya ari nyore kwazvo uye nekushandisa zvishoma zviwanikwa, kubvira isu tiri kunyatso kumhanyisa muchina chaiwo kubva kune internet browser uye isu tinotsamira pane zviwanikwa zvemuchina chaiwo. Semuenzaniso, iyo vhezheni inouya kubva kuArch Linux ndeyeMhando yemhando uye KolibriOS iri nyore kwazvo sisitimu yekushandisa ine graphical nharaunda.
Kune izvi, isu tinotanga kupinda kune ino peji rewebhu nokuti kurodha iyo inoshanda sisitimu. Pano sezvatinoona isu tine zvakawanda sarudzo dzatinosarudza kubva seArch Linux. Tinogona zvakare kusarudza yedu yega ISO mufananidzo wecomputer yedu uye kuiisa kuseva kuti ishandise iyo inoshanda sisitimu (iyo kana, inogona chete kuitwa nemaitiro ari nyore ekushandisa).
Kana tangodzvanya pane inoshanda system, isu tinofanirwa kumirira iyo inoshanda sisitimu yekumhanya uye iyo yekuraira hwindo kana koni inowoneka. Paunenge uchiita iyo OS, mbeva ichave yakavharirwa pane chaiyo muchina skrini (kuivhura, pukunyuka kupukunyuka) uye isu tinokwanisa kuita mirairo nekushanda neOS.
Hapana mubvunzo izano rakanaka kumhanyisa akawanda masisitimu anoshanda asina kuiswa, kunyanya kune vanhu vanoda kudzidza mirairo paconsole. Chinhu chakashata ndechekuti mamwe OS senge Arch Linux ari kunonoka, kunyanya kana muchina wedu une simba kwazvo. Isu zvakare tine sarudzo yekumhanyisa iyo yekare emulator kubva kumusiki mumwe chete, iyo inomhanya JSlinux mubrowser.
Sekuda kuziva, Tinogona zvakare kumhanya Windows 98 paPC yedu, chimwe chinhu chinoyeuchidza chakanyanya kusarudzika kubva munguva dzekare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Maitiro ekunakidzwa neLinux kuburikidza nebhurawuza rako